कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट: अहिलेसम्म थाहा भएका पाँच कुराहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्टलाई भेरिअन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरेको छ र यसलाई ओमिक्रोन नाम दिएको छ। यो भेरियन्टको ठूलो सङ्ख्यामा उत्परिवर्तित भएको छ र प्रारम्भिक प्रमाण अनुसार यो भेरियन्टबाट सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको डब्लुएचओले जनाएको छ।
हालसम्म ‌ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना, बेल्जियम, हङकङ र इजरायलमा पुष्टि भएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर ९ मा संकलन गरिएको स्वाबमा यो भेरियन्ट पुष्टी भएको थियो । त्यसपछि हरेक प्रान्तमा यो भेरियन्टको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा बयस्कहरुमा कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको दर जम्मा ३६ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नयाँ भ्याक्सिन दरमा अझ गिरावट आएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरुले दक्षिण अफ्रिकाबाट हङकङ आएका एकजनामा यो भेरियन्ट पुष्टी भएको बताएका थिए । हङकङका अधिकारीहरुले शुक्रबार दोश्रो केसपनि पुष्टी भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार बेल्जियमका अधिकारीहरुले इजिप्टबाट फर्किएका भ्याक्सिन नलगाएका एकजनामा ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको बताएका छन् । ओमिक्रोन भेरियन्ट युरोपमा भेटिएको यो पहिलो मामला हो ।
उत्परिवर्तनका कारण चिन्ता व्यक्त
ओमिक्रोन भेरियन्टको उच्च संख्यामा भएको उत्परिवर्तनका कारण चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । यो भेरियन्टको अहिलेसम्म मुख्य स्पाइक प्रोटिनमा ३० भन्दा धेरै उत्परिवर्तन भइसकेको छ । अहिलेसम्म भएका भाइरसका उत्परिवर्तनमध्ये यो पछिल्लो उत्परिवर्तन सबैभन्दा सङ्क्रामक रहेको छ ।
यस्ता उत्परिवर्तनका कारण भेरियन्टलाई धेरै संक्रामक बनाउने र प्रतिरोध क्षमतामा हस्तक्षेप हुनसक्नेबारे वैज्ञानिकहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यो भेरियन्टबिरुद्ध भ्याक्सिनले काम गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा पनि परीक्षणहरु भइरहेका छन् । जसको परिणाम दुईसातामा आउने अपेक्षा गरिएको छ । एकजना वैज्ञानिकले यो भेरियन्ट आफूहरूले देखेकोमध्ये खराब भएको बताएका छन्।
अरु भेरियन्टको तुलनामा के फरक छ ?
भाइरस फैलिदै गर्दा यसको नयाँ भेरियन्ट र उत्परिवर्तन अपेक्षित र स्वभाविक नै हो । धेरै उत्परिवर्तनहरू खराब नै हुँदैनन्। ती उत्परिवर्तनले के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हो।
तर ओमिक्रोन भेरियन्टका बारेमा चिन्तित हुनुपर्ने अन्य कारण पनि छन् । अहिलेको चिन्ता भनेको यो भाइरस सुरुमा चीनको वुहानमा देखिएको भाइरसभन्दा उग्र रूपमा फरक छ। ओमिक्रोन भेरियन्ट डेल्टाभन्दा पनि बढी संक्रामक देखिएको छ । डेल्टा भेरियन्ट ठेउलाको भाइरसजत्तिकै संक्रामक रहेको सीडीसीले जनाएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट अन्यका तुलनामा उच्च जोखिमयुक्त रहेको प्रारम्भिक प्रमाणले देखाएको जनाएको छ ।
भ्याक्सिन उत्पादकहरु के भन्दैछन् ?
अमेरिकाका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले नयाँ भेरियन्टबारे रिपोर्टहरूले खतरनाक देखाएको भए पनि गम्भीर बिरामी हुनबाट खोपले अझै पनि जोगाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। भ्याक्सिन उत्पादकहरुले यो भेरियन्टबिरुद्ध भ्याक्सिनले काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने पत्ता लगाउन परीक्षण सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।
अहिलेको मोडेर्नाको डोज र बुस्टर कम भएको खण्डमा यसको मात्रा बढाउने सन्दर्भमा पनि मोडेर्नाले परीक्षण गरिरहेको छ । मोडेर्नाले ओमिक्रोनलाई नै लक्ष्यीत गरेर समेत बुस्टरको परीक्षण गरिरहेको छ । त्यस्तै आष्ट्राजेनेकाले पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभाव भ्याक्सिनमा कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आष्ट्राजेनेकाले यो भेरियन्ट भेटिएका स्थानमा परीक्षण सुरु गरिसकेको छ ।
खोपले काम गर्ने नगर्नेबारे रिपोर्ट २ सातामा सार्वजनिक गर्ने फाइजरले जनाएको छ । आफूहरुले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टबारे विज्ञहरुको चिन्तालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको र आवश्यक परेमा नयाँ भेरियन्टविरुद्ध १ सय दिनमा भ्याक्सिन ल्याउनसक्ने बताएको छ । ल्याब परीक्षणबाट नयाँ भेरियन्ट खोपबाट बच्न सक्ने भए नभएको तथा भ्याक्सिनमा समायोजन आवश्यक भए नभएको थाहा हुने फाइजरले जनाएको छ ।
यदि अहिलेको भ्याक्सिनबाट नयाँ भेरियन्ट बच्नसक्ने अवस्था आएमा भ्याक्सिन ६ साताभित्र नयाँ स्वरुपमा बनाउन सकिने र एकसयदिनभित्र भ्याक्सिन पठाउन सकिने फाइजरले दावी गरेको छ । यसैबीच जोन्सन एण्ड जोन्सनले पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको बताएको छ ।
विभिन्न देशहरुले लगाए यात्रा प्रतिबन्ध
अमेरिका, युरोपका देशहरु, यूके, इजरायल लगायतले यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले ८ देशबाट अमेरिका आउनमा रोक लगाएको छ । सोमबारदेखि लागु हुनेगरी अमेरिकाले दक्षिण अफ्रिका र अन्य ७ देशबाट अमेरिका आउनमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।
स्पेनले पनि दक्षिण अफ्रिका र बोत्सवानाबाट यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नोभेम्बर ३० देखि लागु हुनेगरी यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तय भएको हो । जर्मनीले ठूलो संख्यामा उत्परिवर्तन भएको नयाँ कोभिड १९ को फैलावट रोक्न दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने धेरैजसो यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।